Madaxweynaha oo shacabka ka Codsaday in ay la shaqeeyaan Maamulka Gobolka – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo shacabka ka Codsaday in ay la shaqeeyaan Maamulka Gobolka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in ay la shaqeeyaan Guddoomiyayaasha dagmooyinka gobolka si horumarka looga wada shaqeeyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlayay dib u howlgalinta Xaruntii Dowladda hoose ee xammar ayaa guud ahaan kula dar-daarmay Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir inay iskaashadaan islamarkaana ay ka fikiraan Danahooda si loo Adgeeyo Ammaanka Magaalada Muqdisho iyaga oo la shaqaynaya Maamulka gobolka.
“Dadweynaha Daggan Gobolka Banaadir hala shaqeeyaan Mamuladaas Dhallinyarada ah ee fir-fircoon Afar iyo labaatanka saac labaatan saacadood oo ka mid ah shaqeyn gara, ubareeray qatarta Magaalada ka jirta, intooda badan maaha askar waa dhallinyaro waxku soo bartay xabbad iyo dhibaato waa mahadsantihiin dhallinyaradeena istaagtay aan la shaqayno. Ayuu yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dadka Soomaaliyeed u sheegay in Dhismaha dalka laga rabo dadka isagoo ugu baaqay in qofkasta dhismaha dalka uu mas’uuliyad gaar ah ka saaranyahay
“Xoog iyo dhaqaale waa inaad ku bixisaan dhismaha iyo horu gaca dhaqaalaha dalkeenna, xooluhu wuxuu macna samaynayaa marka aad ku haysato meelo ammaan ah ,xoolaha dalkaan uu leeyahay ee dibadda jira waxaan ugu baqayaa dadka Soomaaliyeed in dhaqaalahaas dalkooda keenaan” ayuu yiri Madaxweynaha.
Ciidammada amaanka oo saaka fashiliyay weerar argagixiso
Barlamaanka oo Su’aalo waydiinaya Wasiirka Maaliyadda
Barlamaanka oo Su'aalo waydiinaya Wasiirka Maaliyadda